Semalt - मालवेयर आक्रमणको जोखिम कसरी हटाउने?
हाम्रो लागि इन्टरनेटमा सुरक्षित रहन सम्भव छैन। शीर्ष शीर्ष एन्टिभाइरस सफ्टवेयर र कार्यक्रमहरूले आक्रमण र घुसपैठको कारण हुने जोखिमहरू हटाउन सक्दैन। यसैले, भाइरस द्वारा संक्रमित हुने तपाईको सम्भावना सँधै बढी हुन्छ। यद्यपि हामी केही उपायहरू अनुकूलन गरेर र हाम्रो सुरक्षा सेटिंग्सको ख्याल राखेर इन्टरनेटमा आफूलाई जोगाउन सक्छौं।
Semalt डिजिटल सेवाहरूको वरिष्ठ बिक्री प्रबन्धक र्यान जोनसनले परिभाषित गरेको यी अभ्यास र रणनीतिहरूको साथ मालवेयर आक्रमणको जोखिम कम गर्न सम्भव छ:
१. तपाईले आफ्नो ESET उत्पाद प्रदायकलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ यदि एक ह्याकरले तपाइँलाई आक्रमण गरेको छ वा तपाइँको प्रणालीले राम्रो काम गरीरहेको छैन भने।
२. तपाईंले आफुलाई ESET उत्पादनहरूको नयाँ संस्करणको साथ रक्षा गर्नुपर्दछ।
You. तपाईंले जहिले पनि सुरक्षित ब्राउजि practice अभ्यास गर्नु पर्छ र पछिल्लो एन्टिभाइरस र एन्टि-मालवेयर सफ्टवेयर स्थापना गर्नु पर्छ।
Your. तपाईका कम्प्युटरहरू सुरक्षित पासवर्ड र प्रयोगकर्तानामहरू द्वारा सुरक्षित राख्नुहोस्।
Yourself. आफूलाई र तपाईंको बच्चाहरूलाई इन्टरनेटमा कसरी सुरक्षित रहन सकिन्छ भनेर सिकाउनुहोस्।
ESET उत्पादनहरू को साथ आफूलाई सुरक्षित गर्नुहोस्
तपाईको डेटाबेस अपडेट राख्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। ईएसईटी भाइरस ल्याबका विज्ञहरू भन्छन कि अधिकांश इन्टरनेट खतराका कारण मानिसहरू आफ्नो सफ्टवेयर र अपरेटिंग प्रणाली अपडेट गर्न ध्यान दिदैनन्। यसैले तपाईको डेटा नयाँ ESET संस्करणको साथ सुरक्षित राख्नु महत्वपूर्ण छ। यसको अद्यावधिक गरिएको संस्करणहरूले द्रुत रूपमा खतराहरू पत्ता लगाउँदछ र तपाईंको कम्प्युटर चौबीसै घण्टा सुरक्षित राख्न सक्दछ। तपाईंसँग मान्य ESET सुरक्षा उत्पादनहरू हुनुपर्दछ। यसको लागि तपाईंले कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग सम्पर्क राख्नुपर्दछ र उनीहरूलाई नयाँ संस्करणहरू कसरी स्थापना गर्ने भनेर सोध्नु पर्छ। पुरानो संस्करणहरू प्रयास गर्न आवश्यक छैन जुन कुनै चीजको लागि राम्रो छैन। ESET उत्पादनहरूको प्रमाणीकरण महत्त्वपूर्ण छ ताकि तपाईंलाई पूर्ण सुरक्षा र सुरक्षाको आश्वासन दिन सकिन्छ। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं फायरवालहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। ESET स्मार्ट सुरक्षा छनौट गर्न को लागी ठूलो संख्यामा फायरवाल छ। तपाईंले आफ्नो फाइल-सुरक्षा प्रणालीहरू राख्नुपर्नेछ जब तपाईं ईन्टरनेट प्रयोग गरिरहनु भएको छ किनकी यसले तपाईंको अनलाइन सुरक्षा र सुरक्षा अधिकतम गर्दछ। अन्तिम तर कम्तिमा तपाईले नियमित आधारमा कम्प्युटर स्क्यान गर्नु पर्छ। प्रत्येक बिहान जब तपाइँ तपाइँको ल्यापटपको अगाडि बस्नुहुन्छ, एन्टिभाइरस उपकरण चलाउन राम्रो छ र यसले तपाइँको प्रणालीलाई सम्पूर्ण रूपमा स्क्यान गर्न दिन्छ।
सुरक्षित इन्टरनेट ब्राउजि P अभ्यास गर्नुहोस्
तपाईंले जहिले पनि सुरक्षित इन्टरनेट ब्राउजि practiceको अभ्यास गर्नुपर्छ। यसका लागि तपाईंले अज्ञात र शंकास्पद वेब पृष्ठहरूमा पहुँच प्रतिबन्धित गर्नुपर्नेछ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँ आफ्नो मनपर्ने सामाजिक मिडिया प्रोफाइल को उपयोग गरीरहेको छ वा इन्टरनेट सर्फिंग गर्दा तपाइँको विज्ञापन-अवरोधक खोल्न। उही समयमा, तपाईले ठुलो अपर केस र लोअर केसको साथ बलियो र लामो पासवर्ड रोज्नु पर्छ। तपाईको पासवर्ड कसैको साथ कहिले पनि साझेदारी गर्नु हुँदैन, कुनै पनि मूल्यमा। ईमेलबाट टाढा रहनुहोस् जुन नयाँ आईडी र अज्ञात व्यक्तिहरूबाट आएका छन्। तपाईंले लि the्कहरू र स्प्याम ईमेल एट्याच्मेन्टहरूमा कहिल्यै क्लिक गर्नु हुँदैन किनभने यी तपाईंको कम्प्युटर उपकरणहरूको लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।
तपाईको कम्प्युटर सुरक्षित राख्नुहोस्
तपाइँ तपाइँको कम्प्युटर सुरक्षित राख्नु पर्छ। यसको लागि तपाईको फाईलहरू र महत्त्वपूर्ण डेटा नियमित आधारमा ब्याकअप गर्नुपर्दछ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले हप्तामा तीन पटक यो प्रक्रिया दोहोर्याउनुहुन्छ किनकि तपाईं फाईलहरू र फोल्डरहरू हराउन चाहनुहुन्न। जब तपाईं USB र DVD को रूपमा बाहिरी उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईंले भाइरस र मालवेयर रोक्नको लागि तपाईंको एन्टिभाइरस सफ्टवेयर खोल्नु पर्छ। तपाईंले कहिले पनि तपाईंको उपकरणको पूर्वनिर्धारित सेटिंग्स परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न जब सम्म तपाईं केही अनिश्चित चीजहरूको अनुभव गर्नुहुन्न।